जनताको घरदैलोमै सरकार पुग्यो, अब विकासमा लाग्नुस् : पूर्वप्रम चन्द
प्रदेश, प्रदेश ३, समाचार
भक्तपुर, २८ फागुन । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले जनताको घरदैलोमै सरकार पुगेकाले अब जनताले विकास माग्दै केन्द्रीय राजधानी धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् ।
मध्यपुरथिमिको होली गार्डेन इङ्लिस सेकेण्डरी स्कूलको ३५औँ वार्षिकोत्सवमा आज बोल्दै उनले भने, ‘अब जनताको घरदैलोमा सरकार पुगेको छ, विकास पनि पहिलाको तुलनामा बढेको छ, अब जनताले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले पुरानो ढर्राको शिक्षा अब काम नलाग्ने बताउँदै विदेशमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने र स्वदेशमै पनि आफैँले केही गर्न सक्ने शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । किताबी ज्ञानले मात्रै अबको शिक्षा अगाडि नबढ्नेमा जोड दिँदै उनले संस्कृत, चरित्र निर्माण, इमान्दारिताको पाठ पनि विद्यार्थीले स्कूलबाटै सिक्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष श्रीकृष्ण केसीले सरकारले निजी विद्यालय बन्द गराउनेभन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरगोविन्द शंखदेव, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मी, प्रिन्सिपल रत्नमान शंखदेवलगायतले निजी विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरलाई धानिरहेको चर्चा गरे। कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई पुरस्कार एवं सम्मान गरिएको थियो ।
अर्जेन्टिना पराजित भएपछि आत्महत्या गरेका फ्यानको शब भेटियो
काठमाडौँ, ११ असार । अधिंकाशको अपेक्षा थियो यस वर्षको विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले बलियो खेल प्रदर्शन गर्नेछ । धेरै अर्जेन्टिनी...
एसइई नजितामा भुल: पाँच लाख विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गम्भीर खेलबाड !
काठमाडौँ, ११ असार । माध्यमिक शिक्षा परिक्षा कक्षा १० एसइई को नतिजा प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण...
अर्जेन्टिना टिमको जिम्मा मेस्सी र मास्चररानोलाई, प्रशिक्षक सामपओली हुन नहुनुको अर्थ रहेन
काठमाडौँ, ११ असार । विश्वकपमा निराशाजनक खेल प्रदर्शन गरेको अर्जेन्टिना यतिखेर तनावमा छ । दुई खेलमा एक अंकमात्र जोडेको अर्जेन्टिनाको...
एउटै विद्यार्थीको दुई दिनमा दुई मार्कसिट !
सिभिल होम्स् डुब्ने खतरा
काठमाडौँ, ११ असार । घर–जग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङको चरम महŒवाकांक्षी योजना र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित भई व्यवसाय...